XOG RASMI AH: Qorshihii dagaal ee Puntland ee gobolka Sanaag oo fashilmay & Isimadda Beesha Warsangeli oo qaarkood ay ku biirayaan Somaliland + Madaxweyne Denni maxaa la gudboon? – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Qorshihii dagaal ee Puntland ee gobolka Sanaag oo fashilmay & Isimadda Beesha Warsangeli oo qaarkood ay ku biirayaan Somaliland + Madaxweyne Denni maxaa la gudboon?
BOSASO(P-TIMES)- Xili ay cirka isku sii shareerayaan xiisadaha u dhaxeeya dhinacyada Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa qaybo kamid ah gobolka Sanaag ka socda kulamo iyo shirar gaar gaar ah oo u dhaxeeya saraakiisha ciidamada Puntland iyo isimadda dhaqanka gobolka Sanaag, kuwaas oo looga arinaysano xal u helida xiisada ka taagan deegaanada Yuubbe iyo Hadaaftimo oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland.
Isimadda qaarkood ayaa go’aansaday in qaab kale loo wajaho Somaliland, kaas oo ku salaysan nabad dhaqameed.
Qorshahani ayaa waxaa soo jeediyey wiil uu dhalay alle ha u naxariistee Suldaan Xasan Cali Jibriil oo 21-kii bishii hore ee September sanadkii 2018 uu ku dilay mid kamid ah ilaalada madaxweynihii hore ee Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas duleedka magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, isagoona Suldaankani cusub uu kulamo kula qaatay maalintii shalay ahayd deegaanka Yuubbe ee gobolka Sanaag qaar kamid ah saraakiisha ciidamada Somaliland.
Inkastoo xog dhab ah aanan laga haynin ujeedka kulankiisii Yuubbe iyo waxyaabaha ay isku af garteen isaga iyo saraakiisha ciidamada Somaliland ayaa waxaa hadana hor taag lagu sameeyey qorshe dagaal oo ay damacsanaayeen ciidamada Puntland ee haatan ku sugan magaalada Badhan si ay weerar ugu qaadaan ciidamada Somaliland ee saldhigeedu yahay deegaanka Yubbe, waxaana qorshahaasi ka hor yimid Suldaanka cusub iyo qaar kamid ah waxgaradka Beesha Warsangeli.
Waftiga wasiirada iyo xildhibaanada ah ee Puntland ee xiligani ku sugan magaalada Badhan ayaa walaac xoogan ka muujinaya odayaal dhaqameed is hor taag ku sameeyey qorshahoodii dagaal, kuwaas oo qaarkoodba la sheegay in ay si hoose uga shaqeeyaan maamulka Somaliland.
Madaxtooyada Puntland oo qabsashada deegaanka Yubbe maalmo ka hor kasoo saartay qoraal ayaa sheegtay in aysan Puntland gor gortan ka gali doonin difaaca deegaanadeeda, waxaana taas badalkeeda haatan muuqda qorshe dhabar jab ah in uu soo wajahay ciidamada Puntland iyo madaxda Denni uu u diray Sanaag oo dhaliil xoogan la muujinayo.
Weli ma cada in Beesha Warsangeli ay ku biiri doonto Somaliland iyo in ay kasii mid ahaan doonto Puntland, hasa yeeshee Suldaanka kulanka la qaatay saraakiisha ciidamada Somaliland ayaa ka gadoodsan xurguf siyaasadeed oo dhex martay xiligii lasoo xulayey Baarlamaanka Puntland madaxweynihii hore ee Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo fara galin ku sameeyey xildhibaano uu soo xulay Suldaankani oo loogu yeedho Suldaanka Nabada taas oo loo aanaynayo niyad jab kaga dhacay Puntland.
Dhibkii Gaas puntland u geystay waa kaas cid uu xushmeeyay ma leh, Puntland waxay u baahan tahay shir guud oo nabadgelyo iyo in dadka tabashadooda la dhegaysto.
Sanaag wiil says:
Adeer waxwalba lama qoree xishooda Sanaag maaha sool Tukaraq iyo Garoowe oo 40 km loo jiro shacabka Sanaag waa ummad isku kalsoon oo Dagaalanta dhulkeedana masuuliyad difaac ka saarantahay. Majeerteen dhul uu Isaaq siiyo umahayno waxaanu uga baahahanahay majirto ee ha boo hoodadeyn cadowga
Kkkk naagihii majeerteen ayagaa is eedeeynaya. kan hada garoowe casirka ku cabaya iyo kii ka horeeyey iyo kii ka dameeyey iyo kii kasii horeeyey waxaa dhamaantood dhulkii laga qabsaday ayagoo cadceed cad soo jeeda. Cade, faroole, gas, deni. Hadana dhamaantood waa isku hadal..,
” puntland dhulkeeda gorgortan ma galayo”
Wafaankuulo… ma waxaas oo kale ayaa ah hadal lagu hadlo markii dharaar cad lagu dhaxlay. Fucking majeerteen.